बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य, कुनको कति ? Canada Nepal
बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य, कुनको कति ?
माघ २८ २०७७
काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्याँसकोको मूल्य बढेको छ । बुधबार नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्याँसको मूल्य बढाएको हो ।
जारी विज्ञप्ति अनुसार निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लिटरमा दुई दुई रुपैयाँ बढाएको हो । त्यस्तै ग्याँसको मूल्यमा २५ रुपैयाँ बढेको हो । अब पेट्रोल लिटरको १ सय १२ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेल लिटरको ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यस्तै एलपी ग्याँसको मूल्य १४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यो मूल्य बुधबार राती १२ बजेबाट लागू हुनेछ।
माघ २८, २०७७ बुधवार २१:२१:३४ बजे : प्रकाशित
# ग्याँसको मूल्य